: at 7/29/2009 12:20:00 AM
အိုက်ခီလောက် said... | Wednesday, July 29, 2009 2:01:00 AM
ဆန့် ငင် ဆန့် ငင်မထား လို့ တော်သေးတယ်
မပြောချင်ဘူး မပြောလိုပါ လုံးဝကို မပြောချင်ပါ
သက်ဆိုင်သူ တွေကို မပြောလိုပါ
မငုံ said... | Wednesday, July 29, 2009 2:24:00 AM
ဟောတော့ ဘွားကီရယ်။ အိမ်သားအားလုံ ကျန်းမာပါစေ။ မြန်မြန်နေကောင်းပါစေနော်။
kaungkinpyar said... | Wednesday, July 29, 2009 2:53:00 AM
အမေလဲ ဒီရက်တွေပါ နေကောင်ပါစေ ဆုတောင်ပေးပါတယ် ကိကိရေ
သားကြီး said... | Wednesday, July 29, 2009 3:35:00 AM
ATN said... | Wednesday, July 29, 2009 4:03:00 AM
ကိုယ်တွေ့ကြုံမှ ဘယ်လိုဆိုတာ သိကြတာကိုး...
ဆယ်စုနှစ်ကျော် အကျယ်ချုပ်နဲ့နေရတဲ့သူကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်သွားပြီဆို
၆၅ နှစ်ကျော် အကျဉ်းချုပ်နဲ့ နေရမယ့်သူတွေကို လူတွေအားလုံး စာနာကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်...
Sein Lyan said... | Wednesday, July 29, 2009 7:01:00 AM
မကီး မေမေ ကျမ်းမာပါစေ
သားတစ်ယောက်က အမေတစ်ယောက်အပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်
maung said... | Wednesday, July 29, 2009 8:07:00 AM
ကီး မေမေ ကျမ်းမာပါစေ
kyalkalay said... | Wednesday, July 29, 2009 8:16:00 AM
ဟိ ဦးလူထွေးကို ပြောပီးဖွားကိကို blog လည်ခွင့်ပိတ်ထားရမယ်
rose of sharon said... | Wednesday, July 29, 2009 9:28:00 AM
မေဇင် said... | Wednesday, July 29, 2009 9:39:00 AM
မမရေ.... နောက်တစ်ချက် သိချင်တယ်လေ...း( ပြောပြ... နောင့် ဆိုရင် လဲ အိမ်မှာ ဇိမ်ကျနေလို့ ပျော်မှာပဲ သိလား... ဟိဟိ... ဒါပေမယ့် လူကြီးတွေကို တော့ သနားပါတယ်နော်...။ အစ်မ မေမေ အတွက် တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို နားလည်အောင် ပြောပြလိုက်ပေါ့...မကောင်းဘူးလား။
ခြေလှမ်းသစ် said... | Wednesday, July 29, 2009 9:54:00 AM
မကီကီရေ ဒါမျိုးက ... ဒီလိုလုပ်ရတယ်.. အထဲမှာ ဒီလိုဖြစ်ရင်.. အပြင်ကလဲ ဆန္ဒလိုက်ပြရတယ်... မကီကီ လဲ အိမ်ထဲမှ အပြင်မထွက်ဘဲ ဆန္ဒပြနေပါလား? အဟိ .... ကလိသွားသည်... တကယ်တော့ ဒါဟာလွဲချော်မှုတခုပါ.. ခုတ်ရာနဲ့ ထစ်ရာတခြားစီပါလား...
Anonymous said... | Wednesday, July 29, 2009 10:41:00 AM
ကြီးတော် အဲလို လုပ်နဲ့လေ။ ဆန့်ငင် ဆန့်င်နဲ့
မကီရဲ့ မေမေ အတွက် ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်
Khyl said... | Wednesday, July 29, 2009 12:21:00 PM
ahphyulay said... | Wednesday, July 29, 2009 9:20:00 PM
နိူင်ငံရေးနဲ့ ဆက်ဆပ်ပြီးခနဲ့ ချင်ရွဲ့ ချင်နေသေးတယ်
မိသားစုနဲ့ သူတို့ ကိုမနှိုင်းပါနဲ့ ဗျာ
ငှက်ကလေး said... | Thursday, July 30, 2009 12:23:00 AM
ဖွားကိရေ ကဲ နောက်တခါ ဆုတောင်းပေးလိုက်မယ် အိမ်သားအားလုံးကျန်းမာပေါစေ နော်
ကိုလူထွေး said... | Thursday, July 30, 2009 1:43:00 AM
ကိကီဆိုရင်လဲ အိမ်ထဲကအိမ်ပြင် မထွက်ဘဲ ချက်တင်ဝင်နေမှာ မဟုတ်လား...